Incazelo: Cosy futhi ukhululekile izivakashi eziyinkimbinkimbi Marlita Beach Ihhotela Apts 4 elula kuleli yokungcebeleka elincane Protaras, isigamu sehora (54 km) drive kusukela Larnaca sezindiza. Luhle labo abafuna ukuphumula nokuthula. Kulapha ngeke ukhathazwa umsindo nesiyaluyalu esaba khona imigwaqo nezinye izihambi - akukho muntu futhi akukho lutho uzoyeka ukujabulela ubukhazikhazi imvelo Mediterranean kanye nobumfihlo phakathi impelasonto romantic.
Izingxenye ezisemqoka ihhotela Marlita Beach Ihhotela Apts 4 - ogwini olunesihlabathi esimhlophe, nasezingeni eliphezulu of service, ukuphepha kanye nengqalasizinda ocebile. Ngenxa yalokhu iholide kuyoba njengoba ukhululekile futhi okukhulu ngokomzwelo. Indawo elula kuyokusiza ukuba ngumnikazi indawo futhi simazi kangcono isiko kuleli zwe. Kuvele izivakashi eziyibonayo kufanele uvakashele Cape yamaGreki - endaweni Botanical - yisiphephelo amakhulu izinyoni.
Azikho izindawo ngaphansi eliyingqayizivele futhi ezithakazelisayo kungenziwa ngokuthi umnyuziyamu zomlando aquarium ka Protaras. abantu abasebenzayo kanye abasha bakwazi ukuncoma ngokuvakashela izikhungo zomdanso, amakilabhu nezindawo zokudlela, okuyinto eseduze ukuba inani Amazing - yonke ukunambitheka kanye nesabelomali. Uma uthanda ukuba bagcine ekuphileni izidalwa olwandle, bese uya esikoleni diving, lapho abafundisi abanolwazi uyofundisa namaqhinga ukuqeqeshwa olunzima.
Amagumbi: I ezine storey eziyinkimbinkimbi Marlita Beach Ihhotela Apts wokwakha izindlu 4 147 namakamelo abanzi futhi-moya nge balcony. imikhakha Iyatholakala: studios nezindawo zokuhlala. Studio ehlotshisiwe nje, kuzo uzothola imibhede emibili olulodwa noma embhedeni owodwa kabili, TV, ucingo, mini-bar, ephephile. Indlu yangasese nge kubhavu itholakala ekamelweni elihlukile, kanye ekhishini. Indlu izivakashi oqondayo nohlakaniphe kakhulu zihlanganisa yokugezela ngamunye kanye Ikhishi.
Njalo yokuhlanza suku izinga kuzo zonke izindawo, futhi ushintsho nelineni - ngohlelo.
Amandla (HB / AI): Kuye isikhathi sokuhlala kwenu, ungakhetha bona elilungile amandla uhlelo. Izivakashi udle yokudlela main (on the "lezitsha" uhlobo). Ukudla imenyu. Ezinganeni - imenyu ehlukile. ukudla okumnandi futhi kwanelise kungaba zokudlela wendawo ezingamabhangqa nemigoqo.
Beach: sandy beach Public welula amamitha 100 kusukela Marlita Beach Ihhotela Apts 4. Izibuyekezo zabantu ogwini okuhle: Beach uhlanzekile, ebhishi futhi amadoda, futhi ukungena amanzi - elula futhi ephephile ezinganeni. Futhi ogwini elaliqaphile abatakuli. Yini embi ngalo zikhokhelwa imibhede nezambulela. Plus - khona ugibele amanzi nokuzijabulisa.
Imininingwane engeziwe: Kusukela ehhotela Marlita Beach Ihhotela, uzothola okuthile wonke umuntu ngaphandle kobunzima. On the indawo kukhona zokudlala, igumbi Billiard, izinkantolo tennis. Ukuze izivakashi eyakhelwe ongaphandle indawo yokubhukuda nge ichibi yokufakelwa kanye ebhishi izihlalo. Ungase futhi ukuqasha imoto uhambe, ubuye ngijwayele izinto zendawo, noma bahambela izindawo zokungcebeleka angomakhelwane.
Nsuku zonke ehhotela uhlela kumnandi ukudansa kanye zamasiko kusihlwa. Kubalandeli ukucula karaoke club Ubuye ebusuku disco. Ingabe nomntwana, udokotela, ehambisa izincwadi. Kukhona ilondolo nokuthunyelwa kwezingubo elondolo. On insimu yonke imisebenzi ye-Inthanethi.
Little ukubuyisa usuku lonke kungaba zingena echibini noma ukudlala ku-wahlomisa ebaleni lokudlala.
Digest: Ngokwe-izivakashi, indawo Marlita Beach Ihhotela Apts 4 - iyindawo wasezulwini ukuze wodwa kanjani, kokuphumula futhi uphumule. Akukho umsindo befuna, umsindo din, ngakho kwabonakala ngesikhathi ukuyeka isinyathelo. Amagama amaningi ezinhle futhi uhlobo Kwakuthiwa ngokuphathelene izisebenzi, izisebenzi meet friendly futhi ubone off izivakashi.
Kodwa uma usafuna imizwelo nangenxa kumnandi kungaba wonke itholakala enkabeni yedolobha. Sekukonke, ehhotela ezinhle ngesikhathi engambi eqolo, anikeza izinkonzo eliphezulu kanye nomkhathi Homely. Lokhu resort ikhuthaza ukuphumula ukubuyisela isimiso sezinzwa, njengoba kukusiza ukubuyisela ubungqabavu.
Ihhotela Club Ares (Turkey, Kemer): incazelo, abahambi Izibuyekezo
Nokugqoka guipure: njengabesifazane kanye zikanokusho
Kungani iphupho amakati omnyama - hhayi kunzima ukuqagela